राज’तन्त्र पुन-र्स्थापनाको जुलु’समा सहभागी नहुन आम जनसमुदायलाई सरकारको आग्रह…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
मंग्सिर १५, २०७७ सोमबार 1
काठमाडौं : सरकारले रा’जतन्त्र पुन’र्स्थापनाको पक्षको जुलुसमा सहभागी नहुन आम जनसमुदायलाई आग्रह गरेको छ ।पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानहरुमा राज’तन्त्रका पक्षमा जुलु’स निस्किरहेको छ ।
यसप्रति सरकार प्रवक्ता समेत रहेका स’ञ्चार तथा सूचनाप्र’विधिमन्त्री पार्वत गुरुङले संवैधानिक प्रणाली, लो’कतन्त्र, कानूनी शासनविरु’द्ध जनतालाई भ’ड्काउने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले रा’जतन्त्र पक्षको गतिविधिमा सहभागी नभइ नेपाल सरकार स’मृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सं’कल्प पूरा गर्न सो दिशामा लाग्न आम जनसमुदायलाई अपिल गर्नुभएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ : मन्त्री भट्टराई !
काठमाडौं : संस्कृ’ति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डय’नमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पुनरो’त्थानका कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभएको छ ।पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले पर्य’टकीय क्षेत्रको विकासका लागि
सरकारले सन् २०२१ लाई आन्तरिक पर्यटनमा केन्द्रि’त कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो । को’रोनाका कारण नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरको प’र्यटन व्यवसायमा प्र’भाव परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो
अहिले नेपालको मात्र नभएर विश्वभरि नै को’रोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा असर गरेको छ, यसलाई उकास्नका लागि सरकारले आन्त’रिक तथा बाह्य उडा’न खोल्न शुरु गरेको छ ।” अहिले ४० प्रतिशत आ’न्तरिक उडान शुरु भइसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
सन् २०२१ मा आन्त’रिक पर्यटन प्रबद्र्ध’नका लागि काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले प्याकेज घोष’णा गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्या’केजका लागि राष्ट्र बैंकले मापद’ण्ड बनाउने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्र बैंकले बनाएको मापद’ण्डअनुसार पर्यटन व्यवसायीले पुनर्क’र्जा लिन सक्नेछन् ।”
फरक प्रसङ्गमा बोल्दै उहाँले पार्टी विभाजन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काङ्ग्रेस र नेकपासहितका द’लसमेत मिलेर जानुपर्ने समयमा पार्टी विभाजन हुनु हुँदैन ।”
पार्टीभित्र सबैको सम्मा’नजनक सहभागि’ताबाट पार्टी विभाजन रोकिने उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरुले पार्टीलाई मिलाएर लैजानका लागि नेतृत्व’लाई आ’ग्रह गरिरहेको बताउनुभयो ।
Prevविवाह गरिदिने आमाबुवाको सपना अधुरै बनाएर अस्ताए प्रहरी इन्सपेक्टर बुढाथोकी, पुरै गाउँ शोकमा डुब्यो !
Nextश्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि सन्दीप लामिछाने हृयाम्स अस्पताल भ’र्ना…हेर्नुहोस् ।
बिहेपछि श्वेता र विजयन्द्रको पुरा परिवारबिच पहिलो भेट, श्रीमानसँग रोमा’न्टिक बन्दै नाचिन् श्वेता…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1359)
२.	असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1359)